Kungani Udinga Ukutshala Amavidiyo Omkhiqizo Esizeni Sakho se-Ecommerce | Martech Zone
Amavidiyo womkhiqizo anikeza abathengisi be-e indlela yokudala yokubonisa imikhiqizo yabo ngenkathi futhi ivumela amakhasimende ithuba lokubuka imikhiqizo isebenza. Ngo-2021, kulinganiselwa ukuthi i-82% yayo yonke i-intanethi izokwakhiwa ukusetshenziswa kwevidiyo. Enye yezindlela amabhizinisi we-eCommerce angathola phambili kwalokhu ukudala amavidiyo womkhiqizo.
Izibalo Ezikhuthaza Amavidiyo Omkhiqizo weSayithi Lakho Le-Ecommerce:
I-88% yabaninimabhizinisi bathi amavidiyo womkhiqizo akhuphule izinga lokuguqulwa
Amavidiyo womkhiqizo akhiqize i-69% ngosayizi we-oda elijwayelekile
Isikhathi esiningi esingu-81% sichithwa kumasayithi lapho kunevidiyo okufanele uyibuke
Amavidiyo womkhiqizo akhiqize ukwanda okungu-127% kokuvakashelwa kwamakhasi abenawo
Lokhu infographic, Kungani Udinga Ukutshala Kumavidiyo Omkhiqizo Namuhla, ichaza izinzuzo zamavidiyo womkhiqizo wabathengisi abakwi-inthanethi futhi inikeze ngamathiphu ayishumi aphezulu azokukhombisa inqubo yokwenza ividiyo yomkhiqizo:
Hlela isu lakho ekwakheni, ekwandiseni, nasekulinganiseni umthelela wamavidiyo wakho womkhiqizo.
Qala kancane ngokudala amavidiyo wakho owakhethayo imikhiqizo ethengiswa kakhulu kunazo zonke.
Gcina amavidiyo akho elula ukukhulisa ukukhanga kubabukeli abahlukahluka kakhulu.
Gcina amavidiyo akho okufushane futhi kuze kube seqophelweni.
Lungiselela amakhasi akho ukuze amavidiyo adlale kuwo Amadivayisi eselula.
Khombisa ifayili le- umkhiqizo osetshenziswayo ukuhlinzeka umuzwa ongcono wokuthinta nokuzizwa kwento.
Lungiselela amavidiyo akho ukushicilelwa ngokwendabuko amasayithi ezokuxhumana nabantu.
Faka a shayela esenzweni ukukhuthaza umbukeli ukuthi athenge.
Sebenzisa ividiyo amazwibela noma imibhalo engezansi yokubukwa lapho umsindo ukhutshaziwe.
Khuthaza okuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi kumakhasimende angempela athenge umkhiqizo.
Qiniseka ukuthi ufunda enye i-athikili yethu ne-infographic ku- izinhlobo zamavidiyo womkhiqizo ungakhiqiza. Nayi i-infographic ephelele:
Tags: amavidiyo omkhiqizo athengiswa kakhulushayela esenzweniamavidiyo womkhiqizo we-ecommerceamavidiyo we-ecommerceinfographicamavidiyo womkhiqizo weselulaokukhiqizwayo okukodwaubude bevidiyo yomkhiqizoisu levidiyo yomkhiqizoamavidiyo womkhiqizoamavidiyo womkhiqizo wezokuxhumanaugc amavidiyookuqukethwe okwenziwe umsebenzisiAmagama-ncazo wevidiyoimibhalo engezansi yamavidiyovideos